> Resource> iPhone> Olee otú jikwaa iPhone Ndi ana-akpo Mfe
Olee otú m nwere jikwaa m na ndetu kọntaktị m iPhone 4 site na kọmputa m? Olee otú m nwere idetuo m na ndetu kọntaktị site iPhone 4 m PC? Daalụ.
Ndi ana-akpo ekere òkè dị mkpa na ndị mmadụ nkwurịta okwu. Bụrụ na ị nwere iPhone, nwere ike ị chọrọ jikwaa iPhone kọntaktị ọma, dị ka tinye kọntaktị, mbubata / mbupụ na kọntaktị na ihichapụ kọntaktị mfe. Ebe a, anyị ga-amasị-egosi gị ụzọ abụọ jikwaa kọntaktsị na gị iPhone.
Ngwọta 1: Olee otú jikwaa kọntaktsị na iPhone si PC
Ngwọta 2: Olee otú jikwaa iPhone kọntaktsị na iPhone
Ọ bụ nnọọ mfe jikwaa iPhone kọntaktsị na PC. All na ị chọrọ bụ ibudata a dị ike iPhone kọntaktị manager - Wondershare TunesGo (n'ihi na Windows ọrụ).
Na ya, ị na-enwe ike nyefee kọntaktị na iPhone si Outlook Express, Outlook 2003/2007/2010/2013, Windows Akwụkwọ Adreèsị na Windows Live Mail, na vCard faịlụ, na ndị ọzọ ụzọ gburugburu. E wezụga kọntaktsị na iPhone 'ebe nchekwa, ị nwere ike ndabere kọntaktị echekwara na Exchange, Yahoo !, iCloud na ndị ọzọ akaụntụ na kọmputa. E wezụga, ị nwere ike ihichapụ kọntaktị na ị na-achọghị na-. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye ọhụrụ kọntaktị, ị nwere ike idezi ozi kọntaktị, gụnyere nọmba ekwentị, email, adreesị.
Nzọụkwụ 1. Launch MobileGo na jikọọ na iPhone na kọmputa
Iji malite, ẹkedori TunesGo na kọmputa gị. Jiri eriri USB jikọọ gị iPhone na kọmputa. Mgbe ahụ, gị iPhone ga-ngwa ngwa ghọtara.
Nzọụkwụ 2. Jikwaa kọntaktsị na iPhone
Ugbu a, pịa "Ndi ana-akpo" ke ekpe ndekọ osisi. na Ndi ana-akpo Atiya, ị nwere ike ịlele kọntaktị niile gụnyere ndị na akaụntụ. Na kọntaktị management window, i nwere ike tinye / mbubata / mbupụ / ihichapụ kọntaktị na ala.
Iji tinye ọhụrụ kọntaktị, pịa "New". A obere window Pop elu. Na nke a window, tinye foto gị, aha, nọmba ekwentị na email. Iji tinye ozi ọzọ, pịa "Tinye Ubi". Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike itinye na saịtị weebụ, IM, adreesị, data, nzukọ na ọbụna n'etiti aha.
Mbubata kọntaktị na iPhone, ị kwesịrị ị na pịa "Import / Export"> "Import kọntaktị site na kọmputa." Mgbe ndọpụta ndepụta na-egosi, ị nwere ike họrọ mbubata kọntaktị site na Outlook, Windows Live Mail, Windows Address Book, na vCard faịlụ.
Nke a na usoro na-ahapụ gị mbupụ kọntaktị site na Exchange, iCloud, Yahoo !, iPhone ebe nchekwa, wdg na kọmputa, Outlook na ndị ọzọ. Họrọ kọntaktị ị chọrọ mbupụ. N'otu aka ahụ, pịa "Import / Export"> "Export kọntaktị ahọrọ" ma ọ bụ "mbupụ niile Ndi ana-akpo". Ekem, ke esiri-ala menu, ị ga-esi ise nhọrọ: Ị nwere ike mbupụ kọntaktị na otu / multiple vCard faịlụ (s), Outlook Express, Windows Address Book, Windows Live Mail na Outlook 2003/2007/2010/2013.
Cheta na: Tupu exporting kọntaktsị na gị iCloud, Yahoo !, Exchange, na ndị ọzọ na akaụntụ, ị kwesịrị ị na mbụ abanye na ihe ndekọ na gị iPhone.
Ọ bụrụ na i nwere ọtụtụ kọntaktị na ị na-adịghị eji, ị nwekwara ike ihichapụ ha na ogbe. Họrọ kọntaktị ị na-ekpebi ka ihichapụ. Pịa "Hichapụ"> "Ee".
Na nza nke oyiri kọntaktsị na gị iPhone, na ị na-eru nke merging ha. Pịa "De-oyiri". Mgbe a usoro na-achọpụta rụọ ndị oyiri kọntaktị, ị ga-enweta a window. Site ndabara, kọntaktị niile na oyiri ọmụma na-ticked apụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka jikota ụfọdụ, i nwere ike uncheck na kọntaktị na ị na-achọghị ka jikota. Mgbe ahụ, họrọ a egwuregwu ụdị na n'elu akara. Mgbe ahụ, pịa "Họrọ jikota".
Ọfọn, ị nwekwara ike jikwaa kọntaktsị na gị iPhone. Enweta "Ndi ana-akpo". Ị nwere ike tinye kọntaktị, dezie kọntaktị, ihichapụ kọntaktị na ndị ọzọ. Otú ọ dị, i nwere ike dị obibi kọntaktị otu otu. Gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ narị kọntaktị jikwaa. Ọ ga-abụ a nnukwu ọrụ. Kama nke ahụ, na ụzọ Part 1, ị pụrụ ime ya ngwa ngwa na effortlessly. Ya mere, na-eme iPhone kọntaktị management, m na-ahọrọ ụzọ ẹkenam ke Part 1.
Download MobileGo ma jikwaa iPhone kọntaktị mfe!
4 Free Ụzọ ndabere gị iPhone Notes